ISHEETROCK VS DRYWALL (IINDIDI KUNYE NESIKHOKELO SOBUNGAKANANI) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya ISheetrock vs Drywall (Iindidi kunye nesikhokelo soBungakanani)
Wamkelekile kwi-sheetrock vs drywall guide yethu apho sigubungela ezona sayizi zidumileyo, iintlobo, iindleko kunye namanqanaba okugqiba.
Xa ucwangcisa ukulungisa kwakhona indlu yakho, kukho ithuba elikhulu lokuba uya kusebenzisa i-drywall. Ukuqonda ngcono umahluko xa kufikwa kwi-sheetrock vs drywall, siza kujonga izixhobo ezizezinye. Apha ngezantsi uyakufumanisa ukuba loluphi uhlobo onokulusebenzisa ngokuxhomekeke kwiprojekthi yakho. Ukuqala, siza kujonga umahluko.
Umahluko phakathi kweSheetrock kunye neDrywall
Yenziwe ntoni iDrywall?
I-Drywall yesiqhelo (yeBhodi emhlophe)
Iphepha elomileyo elingenaPhepha
Ubunzima beDrywall esemgangathweni
Loluphi uhlobo oluCekeceke lweDrywall
Ubunzima beDrywall Sheet
Ezinye iindlela zeDrywall
Iibhodi zeWallboard vs. Drywall
Iindonga zeGypsum vs.
Iindleko zokufaka i-Drywall
Ixabiso eliphakathi lokongeza i-Drywall kwigumbi
Amanqanaba okuGqitywa kukaDrywall
Abantu abaninzi abazi ukuba i-sheetrock luphawu lwe-drywall. Ayilulo uhlobo olwahlukileyo lwezixhobo zokwakha.
Izinto zokuqala kuqala, i-drywall kunye ne-sheetrock zizinto ezifanayo. I-Drywall yenziwe nge-gypsum plaster ecinezelwe phakathi kweeseti zamaphepha amabini atyebileyo.
Kuqhelekile ukufumana uninzi lwabantu lubhekisa kwezi zinto zimbini ngokwendlela eziguqukayo. Asingobantu abaninzi abanokuthi baxelele umahluko kuba awukho mkhulu. Umahluko kuphela kwezi zinto zimbini uphikisana kuphela neekhemikhali ezinophawu lwelungelo lomenzi. Ngaphandle kwalonto, akukho mahluko ubonakalayo oza kubeka ezi zinto zimbini zahlukene. Nangona kunjalo, i-sheetrock ligama lophawu lwelungelo elilodwa lomenzi wenkampani yase-US Gypsum.
Ukuthatha uhambo ezantsi kwindlela yememori, abantu babedla ngokwenza udonga besebenzisa udaka. Le yayiyimbono entle ngelo xesha. Nangona kunjalo, le nkqubo yayichitha ixesha kwaye ifuna izakhono ezintle. Ngo-1894, ibhodi yeSackett eyenziwe ngu-Augustine Sackett yatshintsha oku. Nangona ibhodi kaSackett ingazange ithandwe kwangoko, yayisele yenze igama layo ukuphela kweMfazwe yesibini yeHlabathi.
Okwangoku, i-drywall yakhiwe ngezinto ezingasindi. Ezi zinto zomelele kakhulu. Izinto ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo yi-gypsum. IGypsum lilitye elilukhuni kakhulu elenza izinto ezinamandla kakhulu. Ityunyuziwe kwaye umhlaba ube ngumgubo ocolekileyo. Lo mgubo ucinezelwa phakathi kweseti yamaphepha amabini ashinyeneyo. La maphepha, kunye negypsum ecinezelweyo, enza ibhodi.
Uninzi lwezi bhodi zihanjiswa kwimilinganiselo ye-4 nge-8 yeenyawo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna iibhodi ezinkulu, ziya kufumaneka kuwe. Iibhodi ziyasikwa kwaye zibethelelwe kwizakhelo zomthi zesakhiwo. I-Sheetrock, kwelinye icala, ibhekisa kwigama lophawu olusetyenziswa yiNkampani yeGypsum kwi-drywall yayo.
I-Drywall iza kwiindidi ezahlukeneyo. Oku kuxhomekeke kusetyenziso olulindelekileyo kwaye luya kufakwa phi. Ziza kunye nemiphetho edibeneyo. Imiphetho ethambileyo ibaleka kumacala amade eebhodi. Xa idityanisiwe kunye, ukucofa kuvelisa indawo emxinwa engekho nzulu ebambe indibaniselwano. Oku kubalulekile kuba kunika ukugqitywa kwamalungu angabonakaliyo. Uhlobo lwe-drywall onokuyifuna zezi:
Olu hlobo lwodonga ngokubanzi lumhlophe kwelinye icala kwaye limdaka kwelinye icala. Ngezoqoqosho, lolona khetho lufanelekileyo. I-drywall yesiqhelo iza kuluhlu olubanzi lobungakanani. Owona mncinci umncinci zii-intshi ezi-3/8, ngelixa eyona inkulu iyi-intshi enye. Nangona kunjalo, ukuba ufuna obunye ubungakanani, unokuzicwangcisa kunye nomthengisi wakho. Kuzo zonke iintlobo zodonga olomileyo olona hlobo luqhelekileyo lufumaneka kwiiphaneli ezi-4 x-8 zenyawo.
Olu hlobo luyaziwa njengolukhetho oluhle kakhulu kwimeko ezimanzi. Udonga lunesiciko esiluhlaza esiluncedo ekuxhathiseni ukufuma. I-drywall rhoqo ayinakho oku. Ngenxa yolu lwazi, iibhodi eziluhlaza ziya kungena nzulu ezipokothweni kunebhodi emhlophe eqhelekileyo. Nangona kunjalo, ukuxhathisa ukufuma akuthethi ukuba ibhodi ayinamanzi. Kuyacetyiswa ukuba uphephe ukusebenzisa olu hlobo lwebhodi ukuba iya kuthi inxibelelane namanzi. Iibhodi eziluhlaza zihlala zisetyenziselwa ukubuyisela iithayile kwiindawo ezinobumanzi obulinganiselweyo. Ezi ndawo zibandakanya izindlu zangasese, iikhitshi, amagumbi okuhlamba iimpahla, kunye namagumbi aluncedo.
Iibhodi eziluhlaza zikwabizwa ngokuba ziiplastibhodi ezenziwe ngesamente. Ezi bhodi zisetyenziselwa ubukhulu becala ukutyabeka. Amaphepha angaphezulu kwezi bhodi anamandla amakhulu okufunxa. Iibhodi eziluhlaza okwesibhakabhaka zinokuxhathisa kakhulu ukungunda kunye namanzi. Kuba iibhodi zisetyenziselwa iinjongo zokuthambisa, kuyakufuneka wenze umsebenzi omncinci ukuze ubeke ulungelelwaniso lwe-veneer. Iibhodi zeblue azenzelwanga ipeyinti, iteyiphu, okanye udaka. Kubalulekile, ke ngoko, kubalulekile ukuba uyeke ukuzisebenzisa kwezi bhodi. Uya kuzifumana ezi bhodi zilongezo olukhulu kwigumbi lakho lokuhlambela.
Iphepha elomileyo elingena phepha lithatha indawo yamaphepha aqhelekileyo elomileyo. Bambethe nge-fiberglass endaweni yephepha eliqhelekileyo. Le glasi ikhusela ibhodi kwizinto ezonakalisayo ezifana nokubola. I-drywall engenamaphepha ikwanqabile kakhulu kukungunda kunye nokubumba. Ibhodi inzima kancinci kunezinye iiyantlukwano zodonga olomileyo. I-drywall engenamaphepha ine-texture encinci. Ngenxa yoku, kuya kufuneka usebenzise indawo edibeneyo. Eli khompawundi liya kukunceda ekufezekiseni ukucoceka nokucoceka.
Ezi zi-drywall ezinempawu eziphezulu kunye nezityebileyo. Iibhodi ezimfusa zinezinto ezibalaseleyo kakhulu zokungunda kunye nokufuma. Ziyahambelana noninzi lofakelo. Ezi bhodi zilungile, nangona kunjalo, zilungele iimeko eziphezulu zokufuma. Ukuba kukho unxibelelwano olindelekileyo ngamanzi, iibhodi ezimfusa lukhetho olukhulu.
Olu hlobo lwebhodi eludongeni lusetyenziselwa amandla alo okumelana nomlilo. Ubunzima bebhodi bunokubanjiswa ukufezekisa amanqaku aphezulu kwinqanaba lomlilo. Ukusika iibhodi ze-X kunzima kakhulu. Ukusebenza nebhodi kukwanzima xa kuthelekiswa nezinye iibhodi. Iibhodi zihlala zisetyenziswa kwizakhiwo zokuhlala, iigaraji, amagumbi, kunye nolunye ulwakhiwo olufunwa ziikhowudi zokwakha.
Iibhodi zenziwe ngefayibha engatshiyo. Olona hlobo luqhelekileyo kwezi bhodi luza nge-5/8 intshi yexabiso lokuqina. Obu bungakanani bunokusetyenziselwa iinjongo zokuthintela isandi. Ukuze unganyangeki ngumlilo, ibhodi yeGypsum kufuneka ihambe ubuncinci kwi-1 yeyure yomlilo. Oku kuya kwiibhodi ezi-5/8-intshi. Iibhodi ze-intshi ezi-intshi zithathwa ngeyure eyi-of yovavanyo lokuchasa kumaleko omnye.
Ezi bhodi ubukhulu becala zenziwe ngefayibha yomthi, i-gypsum powder, kunye neepolymers ukonyusa i-STC. Oku kwenza ukuba kube nzima ukusika kunohlobo oluqhelekileyo lweendonga. Uninzi lwezi bhodi zisetyenziswa kwiindawo ezinengxaki yengxolo. Olunye usebenziso lubandakanya amagumbi okuthintela isandi sokurekhoda iaudio kunye nezinye iinjongo.
Nalu ulwahlulo kwezona ndawo zidumileyo zodonga:
I-drywall esemgangathweni yi-1/2 ″ ubukhulu kunye neepaneli ezi-4 x-8 zenyawo, ubunzima be-51.2
1/4 ″ Umgangatho (4'x 8 ', 38.4 ubunzima) (4'x 10', 48 weight) (4 ″ x 12 ″, 57.6 weight) (4 ″ x 14 ″, 67.2 weight)
3/8, umgangatho (4'x 8 ', 44.8 ubunzima) (4'x 10', 56 weight) (4 ″ x 12 ″, 67.2 weight) (4 ″ x 14 ″, 78.4 weight)
1/2 ″ Umgangatho (4'x 8 ', 51.2 ubunzima) (4'x 10', 64 weight) (4 ″ x 12 ″, 76.8 weight) (4 ″ x 14 ″, 89.6 weight)
1/2 ″ Ubunzima (4'x 8 ', 50 ubunzima) (4'x 10', 60 weight) (4 ″ x 12 ″, 70 weight) (4 ″ x 14 ″, 80 weight)
5/8, umgangatho (4'x 8 ', 70.4 ubunzima) (4'x 10', 88 weight) (4 4 x 12 ″, 105.6 weight) (4 ″ x 14 ″, 123.2 weight)
5/8 ″ Lightweight (4'x 8 ', 66 weight) (4'x 10', 79.2 weight) (4 ″ x 12 ″, 92.4 weight) (4 ″ x 14 ″, 52.8 weight)
Zininzi iindidi zobungakanani bodonga onokukhetha kuzo. Esi sigqibo kufuneka saziswe luhlobo lofakelo onalo engqondweni. Apha ngezantsi kukho umboniso okhawulezayo wokwahluka kobukhulu bodonga onokukufumana kwivenkile ekufuphi kuwe.
• Iibhodi ze-intshi ezi-intshi- Eli lelona xabiso liphantsi lobukhulu obufumanekayo kuyo nayiphi na ibhodi oyikhethayo. Uya kuyifumana ukhetho olukhulu ukulungiselela iinjongo zokulungisa kwakhona. Ibhodi isetyenziselwa ubukhulu becala iisilingi kunye neendonga zangaphakathi ezingadingi kuqiniswa. Ndwendwela eli phepha ngolwazi oluthe kratya malunga ukwakheka isilingi .
• Ubungakanani beesentimitha ezi-- -Ukuba mkhulu kathathu kunebhodi esemgangathweni ebhityileyo, le bhodi ibalulekile ekomelezeni ufakelo lwakho. Olu hlobo lodonga lusetyenziselwa ukomeleza iindonga zangaphakathi kuseto lweshishini.
½ ubukhulu beesentimitha - Olu hlobo lodonga lwenziwe ngezinto ezingaphezulu. Ezi zinto zibandakanya ukumelana nokufuma, izinto ezahlukeneyo, kunye nezinye izinto. Iibhodi ezinezi zinto zibandakanya iibhodi eziluhlaza, iibhodi ezipinki, kunye nohlobo X.
Uninzi lweemfuno zakho, ubukhulu bodonga obulindeleyo obuza kufuna ukuba buqheleke bu-½ intshi. Nangona uzakufumana ujongene nokukhetha okuninzi, elona bhodi iqhelekileyo onokuyidinga zii-intshi ze-intshi ubukhulu. Ubungakanani bomgangatho webhodi eqhelekileyo zii-4 x 8 intshi.
Ezinye iimfuno ziya kubiza ibhodi yebhodi encinci. Ukuba kunjalo, oyena mncinci ungafumana ibhodi ye-intshi eyi-intshi. Kodwa ke uya kuba noluhlu olude ngokubanzi lokubhitya onokukhetha kulo.
I-wallboard esemgangathweni enemilinganiselo emi kwi-4 x 8 intshi kunye nee-intshi ze-intshi ezinobunzima obunzima malunga neepawundi ezingama-50. Nangona kunjalo, i-wallboard inokulinganisa ngaphezulu kwe. Ukuba uyazibuza ukuba ibhodi ebhityileyo ifikelela njani kubunzima obungako, kuya kufuneka ke ucinge ngegypsum.
I-Gypsum lilitye elingumgubo ocolekileyo elenza iibhodi zodonga ezahlukeneyo. Kuba lomgubo unzima kakhulu, wenza ukuba iibhodi zibe nzima nazo. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba obu bunzima abunakuphatheka. Ubunzima bebhodi eludongeni buxhomekeke ikakhulu kubude nakububanzi bebhodi nganye.
Iindleko zeentyatyambo zomtshato
Zeziphi ezinye iindlela ezinokusetyenziswa kwezi Wallboards?
Ezinye iindlela zokwenza i-drywall zibandakanya:
1. Iiphaneli ezinombhalo zodonga: Iiphaneli ezinombhalo zinemifanekiso eprintiweyo kuzo. Zisetyenziselwa ukugubungela iindonga ezikhoyo. Ezi paneli zisetyenziselwa ukongeza isitayile kunye nombala ekhayeni lakho. Azinakusetyenziswa njengofakelo kuphela kwaye ke kufuneka isiseko. Xa zongezwa kwiindonga ezikhoyo, ziba ngumthombo omkhulu wokomeleza.
2. Iipaneli zomthi: Inkuni yokwenene yeyona ndlela indala yokwakha udonga. Kusengolukhetho olukhulu ziingcali ezininzi zokwakha. Iipaneli zomthi zithandwa kakhulu kwaye ziye zathandwa ngabathengi abaninzi. Nangona olu hlobo lwepeyinti lusindayo kwaye alunakufikeleleka ngokupheleleyo, inokuba sisongezo esihle kakhulu ekhayeni lakho.
3. Iimveliso zodonga lweWahoo: Iimveliso zeWahoo zisebenzisa i-polystyrene eyandisiweyo ukwenza ufakelo lodonga. Ziyindlela elula yokufaka kunye nokongeza ukhuselo lobushushu ekhayeni lakho.
IWallboard ligama elisetyenziselwa ukubhekisa kuyo nayiphi na into encanyathiselwe kwizakhelo okanye kwizitudiyo ukwenza ukugqitywa kodonga. Asinakho, ke, ukuthelekisa ezi zibini kuba ziyinto enye.
Kukho uluhlu olukhulayo lwezizathu zokukhetha i-drywall ngaphezulu kweplasta. Nangona kunjalo, esi ayisosizathu sokushiya udaka. Oku kulandelayo uluhlu lwezizathu zokuba kutheni abantu bekhetha udaka.
Iindlela zokusebenzisa udaka
Izisa ukucoceka okucocekileyo nokugudileyo ekhayeni lakho
Udaka aludibani nezandi
Udaka lukhangeleke ngobungcali
Bendlela yokusebenzisa udaka
Ifuna ufakelo lobuchule
• Ayinabushushu ngaphakathi kwiindonga
Ukutyabeka kudla ixesha kwaye kunzima
Iinkqubo zokusebenzisa iDrywall
Kulula ukuyifaka nakweyiphi na indawo eludongeni
Ixesha elincinci lofakelo
• Yongeza ubushushu ekhayeni lakho
Bendlela yokusebenzisa Drywall
Ayikulungelanga ukuphambuka kwesandi
• Inzima ngaphezu kokutyabeka
Iindleko zeshidi elomileyo
Umgangatho ½ intshi ye-drywall- $ 10 ukuya kwi-20 yeedola kwiphepha ngalinye
• Ukufuma kunye ne-drywall enganyangekiyo- $ 13 ukuya kwi-25 yeedola kwiphepha ngalinye
• I-drywall enganyangekiyo emlilweni- $ 13 kwiphepha ngalinye
• I-drywall eyomeleleyo yesandi- $ 50 kwiphepha ngalinye
Usenokuzibuza ukuba yimalini ekufuneka uyihlule ukuze ufumane i-drywall efakwe ekhayeni lakho. Iindleko zixhomekeke kuhlobo lodonga olifunayo. Uninzi lwe-drywall ebonakalayo enexabiso elithe kratya kunezinye. Ukufakwa kumgangatho oqhelekileyo oziikwere ezili-1000 kuyakudinga uqikelelo lwama- $ 640 kuludonga olusezantsi lwee-intshi, ama-800 eedola ngohlobo lokufuma kunye nokungunda komngundo, kunye ne- $ 416 eyongezelelweyo ukuba ufuna udonga olungatshiyo.
imifanekiso yokulungiswa kwegaraji
Iindleko zokufakelwa kuluhlu lwama-drywall ukusuka kwi-955 ukuya kwi-2547 yeedola. Oku kuguqulela kwi-1- $ 3 yeendleko zokufakela ngeenyawo zenyawo.
Sebenzisa ukugqitywa okwahlukileyo kufakelo lwakho lwodonga kuya kugqiba iindleko zizonke zesithembiso. Amanqanaba ahlukeneyo okugqitywa kodonga lwe-gypsum ngala:
• Inqanaba 0: Isetyenziselwa ukwakha udonga okwethutyana. Ifuna ukugqiba okuncinci.
Inqanaba loku-1: Oku kugqitywa kusetyenziselwa ukufihla iimbono kunye neendawo zabucala, ikakhulu iisilingi, uphahla, kunye neepaseji zenkonzo.
Inqanaba lesi-2: Oku kugqitywa kubalulekile ukugubungela iibhodi ezimelana nokufuma.
Inqanaba lesi-3: Eli nqanaba lisebenzisa ubungakanani obuphakathi kunye nobunzima bokusebenzisa ngesandla ukulungiselela ukuhonjiswa kokugqibela kodonga.
Inqanaba 4: Eli nqanaba lisebenzisa ukusetyenziswa kwepeyinti ethe tyaba ukugubungela ii-angles kunye namalungu.
• Inqanaba lesi-5: Olu gqibo lucetyiswa ikakhulu ngemeko-bume eneemeko zokukhanya ezingekho mgangathweni.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nokusetyenziswa kwakhona ekhaya jonga eyethu iindleko zokongeza igumbi Isikhokelo apha.
ifestile yebay yekhitshi
iindawo ezithenga iilokhwe zomtshato
isimanga somtshakazi ngosuku lomtshato kwintombi
amaxabiso omtshato atshiphu kuye kunye naye